तपाईंको जिज्ञासा हाम्रो जवाफ
कृपया जिज्ञासा स्पस्ट हुनेगरी पठाउनु होला।
जिज्ञासा :- मैले फागुन महिनामा अति आकर्षक पहेला छिर्के पात भएको र लामा लहरा भएको मनी प्लान्ट किनेर ल्याएँ। फागुन देखि भदौ सम्म बिरुवा राम्रो थियो तर यसपछि बिस्तारै यसका पात हरिया र साना भए, आँख्ला लामा र पात पनि निकै टाढाटाढा पलाएकाछन् र अति ढिलो बढिरहेको छ। अब त साह्रै अनाकर्षक देखिन थालीसक्यो।
रोशनी श्रेष्ठ, काठमाडौं, गृहिणी
जवाफ :- रोशनी जी यहाँ तपाईंले बिरुवा कहाँ र कुन कोठामा राखेको बारे भन्नु भएको छैन। धेरै जसो बोटबिरुवाहरु चिसो मौसममा आराम गर्दछन् र यो अवस्थामा तिनको बृद्धि विकास सुस्त हुन्छ। भदौ अर्थात शरद ऋतु लागेपछि विस्तारै चिसो बढ्दै जान्छ र घाम दक्षिणतिर ढल्कीदै जान्छन। तपाईंको बिरुवा उत्तर फर्केको झ्याल तथा कोठामा राखेको कारण यो समस्या देखिएको हुनसक्छ । किनकी भदौ असोज देखि उत्तरतिरको कोठमा प्रकाश र तापक्रम दुबै घट्दै जान्छ र बोटबिरुवामा यस किसिमका लक्षण देखिन्छन। अन्य जानकारीको लागि (भित्रिय बगैचा) पढ्नुहोस्।
समाधान :- बिरुवा राखिएको ठाउँमा प्रकाश र तापक्रम कम हुदै जान थालेपछि बिरुवा बढि प्रकाश प्राप्त हुने ठाउँतिर (दक्षिण पूर्व पश्चिम फर्केका झ्याल तथा कोठामा) सार्नु पर्छ । यदि यसको विकल्प छैन भने विद्युतिय बत्तिको उज्यालो पनि दिन सक्नुहुन्छ तर यस्ता बत्तिले प्राय तातो फ्याल्ने हुँदा बिरुवा बत्तिबाट कम्तीमा तिन फिट टाढा हुनुपर्छ।
सम्बन्धीत टिप्स :- हरियो बाहेक अन्य रङ्गीविरङ्गी पात भएका बोटबिरुवामा प्रकाश उपलब्धता कम भएमा पातका रङ्ग बिस्तार हरिया हुँदै जान्छन् ।
-प्रकाश कम भएकै कारण पर्याप्त प्रकाशको खोजीमा बिरुवाका आँख्ला लामा हुँदै प्रकाश बढि भएतिर लम्किन्छन ।
-चिसो तापक्रम भएको बेला धेरैजसो बोटबिरुवाले आराम गर्ने हुनाले आराम गर्नु दिनु पर्छ । आरामको अवस्था भनेको बोटबिरुवाहरुको शक्तिसंचयको समय हो। यस्तो अवस्थामा मल हाल्नु हुंदैन र पानी पनि माटो सुख्खा हुन नदिने गरी थोरै हाल्नु पर्छ । आरामको अवस्थामा पानी बढि भएमा बिरुवा मर्न पनि सक्छ।
जिज्ञासा :-केहि महिना अघिसम्म गुलाफको बोट अति आकर्षक थियो तर अहिले पातमा प्वाल पर्नुका साथै कोपिला पनि किराले खाएर बोटै नराम्रो भएको छ, यसको उपचार के होला?
रमिला चापागाइ, कक्षा ९, बनेपा
जवाफ :- गुलाफको बोटमा धेरै किसिमका किराहरुले दुखः दिन्छन् जस्तै लाही, झुसिल किरा, सेता झिगा, राता माकुरा, अन्य उड्ने किराहरु आदि। पातमा प्वाल परेको भए झुसिलकिरा तथा उड्ने हानीकारक किराहरुको समस्या हुनसक्छ। सबभन्दा पहिले त समस्याको कारण के हो त्यो नै पत्ता लागाउनु पर्यो। यदि झुसिल किराको समस्या हो भने, समस्या थोरै भए किरा टिपेर फाल्नु तथा मार्नु उपयुक्त हुन्छ। समस्या सामान्य भन्दा बढि भए बिभिन्न किसिमका घरेलु औषधीहरुको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जस्तै मट्टितेल, बियर, लसुन, अदुवा, खुसा्रनी, सयपत्रीका पात, खरानी, साबुन-पानी, रक्सी आदि। समस्या निकै बढि छ भने किटनासको प्रयोग गर्नु पर्दछ तर किटनासक किराहरुका लागि मात्र विषालु नभई बोटबिरुवाहरुका लागि पनि विषालु हुन्छ। तसर्थ सके सम्म अन्य उपायहरुको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। किटनासकको प्रयोग गर्ने नै हो भने औषधीका बारे राम्ररी बुझ्नु पर्छ। समस्याको समाधान गर्ने खालको हो वा होइन, आवश्यकता भन्दा कडा हो वा कमसल हो आदि। किटनासक जस्तो किसिमको भए पनि केटाकेटीले यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन। किटनासक प्रयोग गर्दा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण नियम तरिकाहरु पालन गर्नु पर्दछ ।
जिज्ञासा :- बोटबिरुवामा लाग्ने रोग र किराहरु र उपचारको बारेमा छोटकरिमा भनिदिनुसन।
कमल राइ, कक्षा ९, बनेपा
जवाफ :-बोटबिरुवामा लाग्ने रोग, किरा र उपचारबारे एउटा किताव नै तयार हुन्छ तै पनि छोटो जानकारी दिने कोशिश गर्छु। बोटबिरुवामा विभिन्न किसिमका रोग र किराहरुले दु:ख दिन्छन् ।बोटबिरुवामा रोग लाग्दा असरमात्र देखिने भए पनि किराकै कारण यस्तो हुन्छ तर हामी ति किराहरु देख्न सक्दैनौं। बोटबिरुवामा दुःख दिने किराहरु दुई किसिमका हुन्छन्। एक किसिमका किराहरुले बोटबिरुवाका पात, डाँठ, मुना ,जरा आदिबाट रस चुसेर हानी पुर्याउँछन् भने अर्का किसिमका किराहरुले बोटबिरुवाका तिनै अंग चपाएर नोक्सान पुर्याउँछन्। रस चुस्ने किराहरु- जस्तै लाही, झिगा, माकुरा आदि यस्ता किराहरुको सामान्य प्रकोप बोटबिरुवाहले सहन सम्छन् तर चपाउने जस्तै झुसिलकिरा, फगलेटे किरा, लाभ्रे किरा, गावारो किरा, चिप्ले तथा शंखे किरा आदिको प्रकोप बोटबिरुवाहरुले सहन सक्दैनन् र विभिन्न लक्षण देखा पर्दछन्। चुस्ने र चपाउने किराहरुका लागि बेग्ला बेग्लै किसिमका किटनासक बनाइएका हुन्छन्। चपाउने भन्दा चुस्ने किराहरु चाँडै मर्छन् र ढिलो सम्म समाधान हुन्छ।
जिज्ञासा :- मलाई बोटबिरुवा रोप्न र फलेका तरकारी, फूल, फलफूल टिप्न असाध्यै मन पर्छ तर हाम्रो बारी मरि शंखे किरा छन्, बारीमा जाने डर लाग्छ। यि किराहरु मगाउने उपाय के छ?
सन्तोष कायस्त कक्षा ७ महाराजगंज
जवाफ :- चाँडै आउँदैछ